How'd it happen and more reports?: နွားနို့ခဲ
***... နွားနို့ခဲ လုပ်ရန် လိုအပ်တာလေးတွေ...
1. နွားနိူ့ –9cups (2250 ml)
2. ရေ - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
3. သံပုရာ (သို့) သံပုရိုရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၅ ဇွန်း
ရေ နှင့် သံပုရာ (သို့) သံပုရိုရည်ကို ရောပြီးဖျော်ထားပါ။
နွားနိူ့ ကို medium heat ဖြင့် ဆူလာအောင်ကျိုပေးပါ။
ဆူလာလျှင် ရေ နှင့် ရောဖျော်ထားသော သံပုရာအရည်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်မွှေပါ။
အဖတ်ဖြူဖြူ နှင့် အစိမ်းနုရောင်အရည်များ အဖြစ်ကွဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
အဖတ် နှင့် အရည်ကွဲလျှင် ၂ မိနစ်လောက်ထပ်ထားပါ။
အဝတ်စပါးပါးခံထားသော ဇကာခုံးကိုရေအေးပိုက်အောက်တွင်ထားပြီး နို.ရည်များကို ထိုဇကာခုံးထဲ လောင်းထည့်ပါ။ ရေအေးပိုက်ကိုဖွင့်ထားပါ။
နို.ဖတ်များအေးသွားလျှင် အဝတ်စကို စုစည်းပြီး အရည်များကို လက်ဖြင့် ညစ်ထုတ်ပါ။
ပြီးလျှင် လေးသောအရာတစ်ခုခုဖြင့် ဖိကာ မိနစ် ၃၀ ခန့် ထားပါ
အရည်များကုန်ပြီး မာလာလျှင် နိူ့ခဲကို ခပ်လုံးလုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကာ low heat ဖြင့် အပူပေးထားသော ဆီသုတ်ထားသည့် non-stick pan ထဲထည့်၍ ၅ မိနစ်ခန့် အပူပေးပါ။
နောက်တစ်ဖက်လှန်ပြီး နောက်ထပ် ၅ မိနစ်ခန်. အပူပေးပါ။
နံဘေးသားများကိုလဲ အနည်းငယ် အပူပေးပါ။
အအေးခံပြီးလျှင် နွားနို့ခဲကလေးကိုရပါပြီ။ (6 photos)